3 kacha mma akwụkwọ John Connolly
Inwe stampụ nke gị bụ nkwa nke ịga nke ọma na ngalaba okike ọ bụla. Akụkọ John Connolly na -enye ihe pụrụ iche nke a na -ahụtụbeghị mbụ n'ụdị ụdị. Ihe onyonyo nke onye na-achọpụta Charlie Parker na-esonye na ntinye ya na ụdị uwe ojii ojii nke o mere atụmatụ ya. Ọ bụ eziokwu na ndị edemede ndị ọzọ ...
3 akwụkwọ kacha mma nke Per Wahlöö na Maj Sjöwall dere
N'ime nka m dị ịtụnanya nke ide aka anọ (usoro nke Alexander Ahndoril na Alexandra Coelho Ahndoril ji mee ihe n'ụzọ zuru oke taa n'okpuru pseudonym Lars Kepler), anyị hụrụ ndị Sweden abụọ ndị ọzọ nwere ike ịtọ ụda maka ọganiihu nke Kepler ọma. , ha bụ ndị ...
3 akwụkwọ Jeffery Deaver kacha mma
N'ọchịchị oke egwu ma ọ bụ na -enyo enyo, Jeffery Deaver bụ onye ịgba egwu kacha mma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. Ana m ekwu maka nke kachasị maka ọnụego amachibidoro. Akara ngosi frenetic m wepụtara site na ọrụ ide akwụkwọ n'onwe ya. Deaver dechara akụkọ ya wee kwadebe maka nyocha, ...
Ọnwụ na Santa Rita, nke Elia Barceló dere
Ụdị nchọpụta ahụ nwere ike inye ihe ịtụnanya na-atọ ụtọ n'ụdị mweghachi ahụ nke na-akpọku akwụkwọ site na isi ya na mmalite akụkọ. Ọbụna karịa ma ọ bụrụ na anyị nọ n'isi njem anyị na-ahụ onye edemede dị ka Elia Barceló. Ozugbo a na-eche na mweghachi ọ bụla na-eweta ihe ijuanya na ike ọhụrụ ...
Oriakụ March nke Virginia Feito dere
Mgbe atụnyere onye edemede ọhụrụ dị ka Virginia Feito na Patricia Highsmith, ọrụ dị ka mma agha nke Damocles na-eche nkatọ izugbe nke ndị na-agụ akwụkwọ ka ha kwụsị ikpe ikpe ahụ. Na-akwado ntụnyere ziri ezi, ka echiche a na-arụtụ aka ka ọrụ a na-agbasa, were…
Akwụkwọ 3 kacha elu nke Craig Russell
Na -enweghị mkpọtụ nke ndị ode akwụkwọ ndị ọzọ nwere nnukwu nnabata mba ụwa, Scotsman Craig Russell na -aga n'ihu na ọrụ edemede ya nke juputara na akwụkwọ akụkọ nyocha na -atọ ụtọ nke ukwuu. N'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmishọna Fabel ma ọ bụ onye nyocha Lennox, onye edemede a nwere ike nweta ihe ...